गोकुल थोकर Archives - Fonij Korea
आखे (बाजे) तँपाईको पालोमा रमाइलो के गरेर गर्नु हुन्थ्यो ? बुढा यसो गम खान्छन् । फिस्स हास्छन् । सेतै फुलेको कपाल छाम्छन् । चाउरीदै गएको गालामा हासोको लाली देखिन्छ । ती पुराना दिन सम्झन समय लाउँछन् । मानौ उनी कुनै लाइबेरीमा त्यो पुस्तक खोज्दैछन् जहाँ उनको जिन्दगीकाे रमाइलो गरेको च्याप्टर छ । रंगीन जीवनको एक पाटो शब्द मिलाइ मिलाइ लेखिएको छ । उनी त्यही पढेर मलाई सुनाउन चाहान्छन् । कुनै चर्चित लेखकले आफ्नो पुस्तकको च्याप्टर पढेर सुनाए जस्तै । हाम्रो बेलामा रमाइलो गर्ने तरिका तिमीहरुको जस्तो थिएन । रेडियो, टिभी,फुर्सदमा
गोकुल थोकर Breaking News, बिचार / अनुभूति Comments are Off
माम अर्थात हजुरआमा
सधै यस्तो हुँदैन । जब शब्दहरु खोज्छु मन अमिलो हुन्छ । सम्झना झन ताजा हुन्छ । चित्त दुख्छ । आँखा त्यस्सै रसाउँछ । लेखिनु पर्ने शब्दहरु त्यस्सै कता हराउँछ हराउँछ । घरि के सम्झन्छु घरि के ? कुनै जमना थियो । गाउँमा गाडी जाँदैनथ्यो । अहिले पनि पानी झरी परेको बेलामा जाँदैन । काठमाडौ जिरी सडकमा पर्ने मुडे हाम्रो लागि नजिकको बजार हो । यो बजार पुग्न झन्डै २५ किलो मिटर हिड्न पर्छ । यति बाटो छिचोल्न अलि हिड्न सक्नेलाई आधा दिन लाग्छ । अलि ठीकै हिड्नेलाई दिन भरिकै बाटोफुर्सदमा
कालिञ्चोकको डाँडोमा सेताम्मे हिउँ झरे पछि तिमी त्यता फर्किएर भन्थेउ हिउँ कपास जस्तै हुन्छ । म सम्झन्थे फुपुले आसामबाट ल्याएकी आसामे पुरानो सिरकको मक्किएको खोल छेउ छेउबाट निस्किएको मैलिएको कपास म यसो छाम्थे हिउँ नरम हुने रहेछ । ….. तिमी सम्झदै भन्थेउ हिउँ फुर फुर झर्छ तातो हत्केलामा पर्ने बितिक्कै पग्लेर पानी बन्छ । ….. हिउँमा हिउँ मान्छेका पाइताला हुन्छन् छपक छपक बसेको ती कता जान्छन् कता घुम्छन् सबै देखिन्छन् म अचम्मै पर्थे म पनि आफ्नो पाइतालाको छाप छपक छपक राखेर हेर्न चाहन्थे हिउँ मान्छे झै । …….. धेरै पछिफुर्सदमा
गोकुल थोकर Breaking News, साहित्य Comments are Off
टेम्पल स्टेमा एक दिन
नेपालमा होम स्टे भने जस्तै दक्षिण कोरियामा टेम्पल स्टे छ । यो विदेशीलाई बौद्धमार्गी कोरियन कला संस्कृति देखाउने सजिलो उपाय हो । हामी पनि टेम्पल स्टे हेर्न जाने भएका छौ । यसरी टेम्पल स्टे हेर्न जानको लागि सबै मिलाउने काम सउल नेपाल गुम्बाले गरेको छ । ‘बिहानको ठ्याक्कै नौ बजे कोरियन टाइममा गाडी गुड्छ ।’ हिजो फोनमा सउल नेपाल गुम्बाका लामा प्रमुख कुन्साङ लामाले भनेका हुन् । एक हुल कोरियन साढे आठ नहुँदै बसमा चढि सके । केही नेपालबाट कोरियामा घुम्न आएका लामा छन् । ती पनि समय भन्दा अगाडीफुर्सदमा
गोकुल थोकर बिचार / अनुभूति Comments are Off
यही बेलामा डुली हिड्ने लक्ष्मी हाम्रोमा पनि आउने आशामा आमा राँके बजारबाट रंग ल्याउँथिन रंगोली बनाउँथिन् भलै ठूला घरे साहुको जस्तो हुन्नथ्यो भए पनि आफ्नो ल्याकतको थियो । साना साना पाइला पनि थिए घर भित्रै सम्म बनाइएका लक्ष्मी आउन बाटो धन दौलत, सुन चाँदी भए पो एकै ठाउँमा राखेर पुजा गर्नु ? सापट लिएका दुई चार सय न थियो त्यही पैसा र आमाबाको बेको बेला दाइजोमा ल्याको तामाको खड्कुँलो पुजा त गरेकै हो । अरुका झै वत्ती नै वत्ती बालेर दीपावली नगरे पनि तिहुनमा हाल्ने भुटुन कम गरेरै पाँच वटाफुर्सदमा